म्याग्दी अस्पतालमा ड्युटीमा रहेको समयमा एकजना गर्भवती महिलाको इमर्जेन्सी अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो । ती गर्भवती महिलाको अप्रेसन गर्नका लागि रगत र रक्तदान गर्ने व्यक्ति खोज्न समय लाग्ने भयो ।
गर्भवती महिलाको रगतको ग्रुप आफ्नै रगतको ग्रुपसँग मेल खाएपछि एक पाउण्ड रगत दिए । १० मिनेट आराम गरेर आफैंले ती गर्भवतीको अप्रेसन गरे । यो वि.सं २०७१ भदौ/असोजतिरको घटना हो ।
२०७१ साउन २८ गते एक महिला अत्यधिक रक्तश्रावपछि म्याग्दी अस्पतालको वार्डमा ल्याइन्छिन् । पाठेघरमा साल बस्नुपर्ने स्थानमा सालको ट्युमर पलाएपछि उनको रक्तश्राव भएको थियो ।
अस्पतालमा आउँदा उनको हेमोग्लोबिन ३ जी/डीएलमा झरेको थियो । तत्कालै तीन/चार पोका रगत आवश्यक पर्ने भयो । यसमा पनि रगत दिन उनी आफैँ अगाडि सरे ।
३ पाउण्ड रगत चढाएर ती महिलाको पाठेघर सफा गरेको स्मरण अझै ताजा रहेको उनी बताउँछन् ।
सन् २००८ तिर जुम्ला अस्पतालमा काम गरिरहेको समयमा एकजना बिरामी आए । रक्त अल्पताका कारण उनको पनि हेमोग्लोबिन ४/५ मा झरिसकेको थियो । तत्काल रगत खोज्दा रगत दिने व्यक्ति पाइएन, त्यसपछि डा. आफैँ अघि सरेर आफ्नै रगत निकाले ।
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा काम गर्दा रातिको समयमा एकजना गर्भवती महिलाको इमरजेन्सी अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो । बिरामीका आफन्तले रगत खोज्न कोशिश गरे, चाहेको ग्रुपको रगत पाउन सकेनन् । त्यसपछि डाक्टर आफैंले रगत दिए, अनि अप्रेसन भयो ।
यी उदाहरण मात्र हुन् । आफैँ उपचारमा खटिने डाक्टर सन्देश पन्थले २० वर्षको दौरान १०० पटक रक्तदान गरे ।
सन् २००० मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि बंगलादेशमा पहिलोपटक रक्तदान गरेका डा. सन्देशले पछिल्लोपटक सन् २०२० को जुलाइमा अष्ट्रेलियामा रक्तदान गरे । दोस्रोपटक एमपीएच गर्नका लागि सन् २०१७ मा बंगलादेश गएको समयमा पनि उनले रक्तदान गर्न छुटाएनन् । बंगलादेशमा २० पटक अनि अष्ट्रेलियामा ३० पटक रक्तदान गरेका उनले बाँकी चाहिँ नेपालमै दान गरेका हुन् ।
बंगलादेशका मेडिकल कलेजमा रक्त संकलनका लागि सन्धानी नामको छुट्टै संस्था हुन्छ । मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूले नै सञ्चालन गर्ने सन्धानीमा उनले पहिलोपटक रक्तदान गरेका थिए ।
‘त्यसभन्दा पहिला पनि रक्तदान गर्ने मन थियो, तर कहिले के कहिले के कारणले मिलेको थिएन,’ डा. पन्थले लोकान्तरसँग भने । गुल्मीको बलेटक्सारमा जन्मिएका डा. सन्देश काठमाडौंमा हुर्के । पछि गुल्मी सदरमुकाम तम्घासको अस्पतालमा काम गरे ।
जुम्ला, गुल्मी, बुटवल, म्याग्दी, लमजुङ लगायतका जिल्लामा काम गर्दा उनले पटक–पटक रक्तदान गरे । आकस्मिक अप्रेसनको समयमा उनले रक्तदान गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन् । पाटन अस्पतालमा आफ्नै श्रीमतीका लागि पनि दुईपटक रक्तदान गरे, तर त्यो रगत श्रीमतीका लागि प्रयोग गर्नु परेन । ब्लड बैंकमा लगेर बुझाए ।
रक्तदान गरेको १० मिनेटमै बिरामीको अप्रेसन
एक स्वस्थ्य व्यक्तिले प्रत्येक ३ महिनामा रक्तदान गर्न सक्छ । डा. सन्देशले २० वर्षदेखि लगातार रक्तदान गर्दै आइरहेका छन् ।
‘सामान्यतया रक्तदान गरेपछि ३० मिनेट रेस्ट गर्न भनेर हामीले सुझाव दिएका हुन्छौं, आफैंले इमरजेन्सी अप्रेसन गर्नुपर्दा त्यो समय कहाँ पाउनु, १० मिनेट बसेर काम शुरू गरिहाल्नुपर्छ,’ डा. सन्देशले स्मरण गरे । पहाडी जिल्लामा काम गर्ने समयमा उनले कयौंपटक अप्रेसनको समयमा आफैंले रगतको जोहो गरे ।
पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा रहेका डा. सन्देशले रगतका अतिरिक्त प्जाज्मा (रगतमा भएको प्रोटिन) दिइरहेका छन् । प्लाज्मा हरेक १४ दिनमा दिन मिल्छ । ‘नेपालमा रगतबाट प्लाज्मा छुट्टाएर लिने प्रविधि छैन, त्यहाँ त्यो सुविधा भएकाले प्रत्येक १४ दिनमा प्लाज्मा दिइरहेको छु,’ डा. पन्थले भने ।
‘अहिले नेपालमा कसैलाई प्लाज्मा र सेतो रगत (प्लेटलेट) दिनु पर्‍यो भने पहिला पूरै रगत निकालेर प्लाज्मा र प्लेटलेट छुट्ट्याएर दिने गरिन्छ, रगतको तत्व छुट्ट्याएर लिन मिल्ने मेशिन नेपालमा ल्याउन सके प्लाज्मा र सेतो रगत चाहिने बिरामीहरूका लागि धेरै फाइदा हुन्थ्यो,’ डा पन्थको भनाइ छ ।
बिरामीको त्यो खुशी
आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई डाक्टर आफैंले रगत दिएर ज्यान बचाउँदा उनीहरू कति खुशी होलान्, त्यो खुशी कसरी मापन गर्न सकिएला र ?’ डा सन्देश स्मरण गर्छन् ।
रगतमा हामी कति निर्भर छौं ?
कुनैपनि ठाउँमा कुल जनसंख्याको कम्तिमा १ प्रतिशत व्यक्तिले नियमित रक्तदान गरेमा मात्र रगतको कमी नहुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा अझैपनि धेरैजसो रगतको अभाव हुने गर्छ । कमै मानिसहरू रक्तदानका लागि अगाडि सर्ने गर्छन् । ‘आममानिसमा रक्तदान गर्दा शरीरलाई कुनै कमजोरी हुँदैन, रक्तदान नगरेपनि रगतको विभिन्न तत्व र सेल त्यसैपनि खेर जान्छ, त्यसैले रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अझै विकास भइसकेको छैन,’ डा सन्देश भन्छन् ।
काठमाडौं लगायतका केही ठूला सहरमा ब्लड बैंक भएपनि धेरै ठाउमा ब्लड बैंक छैन । जिल्लामा कुनै अप्रेसन गर्नुपर्‍यो अथवा कसैलाई रगत चढाउनुपर्‍यो भने सेना तथा प्रहरीको ब्यारेकमा गएर रक्तदाता ल्याउनु पर्ने अवस्था अझै पनि रहेको उनको अनुभव छ । ‘अहिले रक्तदान गर्ने संस्कारको विकास भएको छ, तर पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।
समुदायको सहयोगविना रगतको व्यवस्थापन निकै गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । म्याग्दी अस्पतालमा काम गर्दा अस्पतालमा अप्रेसन सेवा शुरू गरेका उनले म्याग्दीमा हुँदा त्यहाँका सामाजिक अभियान्ता सुरज केसी लगायतले रक्तदाता समूह नै बनाएर आवश्यक पर्नासाथ रगत जम्मा गर्न सकिने जनशक्ति तयार बनाएको उनले स्मरण गरे ।
डा. सन्देशले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले क्रमशः विभिन्न जिल्लामा रक्तदान गर्ने समूह तयार भएका छन्, तर पर्याप्त छैन ।’
सक्रिय जीवन जिउने समयसम्म र दिन मिलेसम्म रक्तदान गरिरहने उनको सोचाइ छ । ‘रक्तदान गर्ने कुरा अब त बानी नै भइसक्यो,’ डा. सन्देशले लोकान्तरसँग भने ।
रगत दिने समय पुग्नासाथ रक्तदान गर्न दौडिहाल्ने उनी बताउँछन् ।